Posted by: chhepyastra weekly | जनवरी 29, 2011
प्रतिक्रियावादीहरू भारतीय शासकसाग मिलेर हिजोको नारायणहिटीको स्थान लिन खोल्दैछन्
गिरिराजमणि पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य- एनेकपा माओवादी
०	सरकार गठन विषयमा के-कति प्रगति भइरहेको छ, त्यस ’boutमा केही बताइदिनुस् न ?
सरकार गठनको विषयमा महिलेसम्म भएका वार्ता, छलफल तथा अन्तरक्रिया’boutमा भर्खरै हाम्रो स्थायी समितिको बैठकमा गम्भीररूपमा छलफल भयो । शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको समग्र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारविहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएका थियौा । त्यसपछि दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा संसद्को अधिवेशनलाई नियमित अधिवेशन बनाइएको छ । यतिबेला सबै दलहरूमा सरकारविहीनतामा मुलुक रहनुहुादैन भन्ने परेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषय अहिले मुख्यरूपमा उठेको छ । विभिन्न सर्त राखेर सरकार गठन गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू लागेका छन् । हामी मुख्य गरी तीन कारणले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भनेका हौा । पहिलो, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको कोणबाट जनताले शान्ति र संविधानलाई नेतृत्व गर्ने अभिभारा नै माओवादी पार्टीलाई दिएका छन्, दोस्रो माओवादी शान्तिप्रक्रियाको मुख्य पक्ष भएकाले र तेस्रो जनताको मुख्य एजेन्डा संघीयता, धर्मनिरक्षता, गणतन्त्र, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणजस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने मुख्य शक्ति भएको आधारमा हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । समग्र मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादीकै हो । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिन विभिन्न शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा अनेक सर्तहरू थपिने काम भइरहेको छ । माओवादी पार्टीलाई आत्मसमर्पण गराउनेजस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । यस्ता कार्यलाई हाम्रो पार्टीको स्थायी समिति बैठकले अस्वीकार गरेको छ ।
०	माओवादी सत्ताकेन्दि्रत भएर जनमुक्ति सेनाको समायोजनको विषयमा हतारमा निर्णय गर्न लागेको प्रचारमा आइरहेको छ नि ?
अनमिन नेपालबाट गइसकेपछि यहााको शान्तिप्रक्रियामा नयाा परिवेश देखापर्यो । त्यसैकारण हाम्रो पार्टीले जनसेनालाई औपचारिकरूपमा विशेष समिति मातहत ल्याउन शक्तिखोरमा कार्यक्रम गर्यो । यसपछि केही प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छन् । एकातिर संविधान निर्माण सुनिश्चित भइसकेको छैन, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राज्यको पुनर्संरचना, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणजस्ता प्रश्नहरू हल भइसकेका छैनन् । अर्कोतर्फ शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनासाग मिलाएर एउटा राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि यथेस्ट काम नहुादा जनसेनालाई विशेष समिति मातहत ल्याउने कार्य हुनुले जनतामा आशंका उब्जनु स्वभाविकै हो । शान्ति र संविधान निर्माणको कोणबाट हामीले सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाको विषयमा छलफल गर्नैपर्ने हो । पार्टीले लिएको मान्यताकै आधारमा अहिले जनसेनासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सत्ताकेन्दि्रत भएर जनसेनालाई विशेष समिति मातहत ल्याइएको भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत छैनन् । क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै समयमा जनसेनालाई विशेष समिति मातहत ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसैलाई अहिले व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढाइएको हो । माधव नेपालकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा यो प्रक्रिया अगाडि नबढाऔा, सहमतिको सरकार गठन गरेपछि मात्र यो जनसेना विशेष समिति मातहतमा ल्याउने काम गरौा भन्ने थियो । नयाा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेको, नियमावली पनि संशोधन भइसकेको, सरकारविहीनतालाई अन्त्य गरी जाने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय दलहरूबीच सहमति पनि भएको, माओवादीको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन सकिने जस्ता कुराहरू आएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले जनसेनालाई विशेष समिति मातहतमा ल्याउने कार्यक्रम गरेका हौा । यसको पछाडि अर्को केही कारण छैन । यही घट्ना तथा कार्यक्रमको आधारमा अन्य विश्लेषण निकाल्न अहिले हतार हुन्छ ।
०	तर, तपाईंले भनेभन्दा विपरीत माओवादी पार्टीकै केही नेता तथा कार्यकर्ता माओवादीलाई सत्ताको ललीपप देखाएर विपक्षीहरूले सेना समायोजनको लागि तत्पर गराए भन्छन् नि ?
यस्तो आरोप गलत छ, हामीले अघिल्लो वर्ष गरेको आन्दोलनको सेरोफेरो मै गरिने भनेको कार्यक्रम अहिले गरिएको छ । मन्त्री पदकै लागि, सत्ताकै लागि गर्नुपर्ने भए हिजो पनि सरकार छोड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, अहिले पनि त्यस्ता प्रस्तावहरू आइनै रहेका छन् । माओवादीलाई बाहिरी कोणबाट लगाइएका आरोपहरू सही छैनन् । संसद्वादी कोणबाट ती कुराहरू सही हुन सक्छन् । यति ठूलो त्याग र बलिदानीबाट आएको पार्टीको नेतृत्व सेना समायोजनको विषयमा सजग छ ।
०	अब संविधान निर्माणको लागि लगभग चार महिना बााकी छ, यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर संविधान निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ त ?
माओवादी पार्टीहरूको नेतृत्वमा सबै दल सहभागी भएको सरकार बन्यो, जनताको कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न अग्रगामी योजनाअनुसार सहमति भयो भने चुनौतीहरूको बीचबाट पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेन, सहमतिको स्थिति पनि सिर्जना भएन भने जोकोही सरकारमा गए पनि संविधान बन्न सक्दैन ।
०	तपाईंहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेन भने तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
हामीले बहुमतीय प्रणालीभित्रै सहमति खोजौ भन्दै आएका थियौ । संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा माओवादी आइसकेपछि अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर सहमतीय प्रणालीलाई बहुमतीय बनाएपछि यो समस्या देखापरेको हो । माओवादीको नेतृत्वमा सहमति हुादैन र पुरानै संस्करण पुनरावृत्ति गरिन्छ भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ । स्वभाविक ढङ्गले अरु दलहरूकै पक्षमा बहुमत आउाछ भने हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर आˆनो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
०	तपाईंहरू सरकारमा जान चाहिरहनु भएको छ, तर पार्टीभित्रै सरकारमा जाने र नजानेबीच विवाद चलेको छ भनिन्छ नि ?
हाम्रो पार्टीभित्र मतभेदहरू नभएका होइनन् तर अहिले कतिपय माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद छैन ।
०	भनेपछि तपाईंहरू सरकारमा गएर जनतालाई शान्ति र संविधान दिने भन्ने विषयमा पार्टीमा एकमत हुनुहुन्छ ?
संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाका सदस्यहरूले मात्र गरेर हुादैन, जनताले पनि आˆनो ठाउाबाट दबाब दिनुपर्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लाखौा जनता सडकमा नउत्रेको भए, त्यो आन्दोलन सफल हुने थिएन । अहिले जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले सडक, सदन र सरकार तीनै मोर्चाहरूबाट यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकार एउटा सानो मोर्चा हो, सदन अर्को मोर्चा हो र सडकको मोर्चालाई पनि कार्यकारी बनाउनुपर्दछ । यतिबेला यहााका प्रतिक्रियावादीहरू र भारतीय शासकवर्गहरू मिलेर हिजोको नारायणहिटीको स्थान लिन खोजिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीलाई आत्मसमर्पण गराउने, दलाल बनाउने कोसिस एकपछि अर्कोले डिजाइन गरिरहेका छन् । यतिबेला राष्ट्रियताको प्रश्न पनि गम्भीररूपमा उठेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा भए पनि नभए पनि जनताको सडकको भूमिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी सरकारमा गए पनि जनताको भूमिकालाई बढाउनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौ ।
०	अन्त्यमा, थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
मुलुक अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ । नेपाललाई इराक, अफगानिस्तान बन्न नदिने हामीले हाम्रा समस्या आफैा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । शान्ति र संविधान निर्माणको जिम्मेवारीलाई पूरा हुन नदिन यथास्थितिवादी शक्तिहरू लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशभक्तहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनकारीहरू सबै एकताबद्ध भएर जनयुद्धको आधारभूमिमा भएको जनआन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्न सबैलाई यस पत्रिकामार्फत् अनुरोध गर्दछु ।